ပို့ကုန်ရငွေသွင်းရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ ၄ဝ စာရင်း စီးပွားကူးသန်း ဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန် - Yangon Media Group
ပို့ကုန်ရငွေထည့် သွင်းရန်ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ ၄ဝ ကိုရက်ပေါင်း၆ဝအတွင်း စာရင်း ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရန် စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနက ဇွန် ၆ ရက်က ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ၂ဝ၁၇ခုနှစ်အတွင်းပြည်ပ သို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီးနောက် ပို့ကုန် ရငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန် ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများအနက် ပမာဏ အများဆုံးကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ ၄ဝ ခုရှိပြီး ယင်းကုမ္ပဏီများအနေ ဖြင့် ဇွန် ၆ ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၆ဝ အတွင်း ပို့ကုန်ဝင်ငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းနိုင်ရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် နှင့် ဆက်သွယ်စာရင်းရှင်းလင်း ဆောင်ရွက်ကြရန် အသိပေးကြေညာ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ”ပြည်ပကိုပို့ကုန်တင်တဲ့ကုမ္ပဏီ တွေအနေနဲ့ ပို့ကုန်ရငွေအားလုံး ကိုပို့ကုန်တွေ သင်္ဘောတင်တဲ့နေ့က စပြီး ခြောက်လအတွင်း နိုင်ငံတော် အတွင်းမှာရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဘဏ်ငွေ စာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့် သွင်းရမယ်ဆိုတာ ဥပဒေနဲ့ ပြဌာန်း ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပို့ကုန် ရငွေပြန်လည်ထည့်သွင်းဖို့ ပျက် ကွက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေ ရှိနေသေး တယ်။ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အချိန် အတွင်းမှာ ပို့ကုန်ရငွေတွေကို ပြန် လည်ထည့်သွင်းဖို့ပျက်ကွက်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို တည်ဆဲဥပဒေတွေ နဲ့ အရေးယူသွားမှာပါ”ဟု ဇွန် ၆ ရက်ကဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြော သည်။
ယင်းကုမ္ပဏီများ၏အမည် စာရင်းကိုစီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန website ဖြစ်သော www.commerce. gov. mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် နိုင်ငံ ခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (ဖုန်း ဝ၁-၅၄၃၅၁ဝ၊ လိုင်းခွဲ-၂၆၇)သို့ ဆက်သွယ်စာရင်းရှင်းလင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းင်းက ”အရေးယူမှုတွေက တော့သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပို့ ကုန်ရငွေအားလုံးကို ပြန်လည်မ ထည့်သွင်းဘဲပျက်ကွက်တဲ့ ကုမ္ပဏီ တွေကို ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပေး ထားတဲ့ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း ရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းတာ၊ တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အညီ အရေးယူတာတွေ ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။ ၂ဝ၁၆ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအ တွင်း ပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီး နောက်ခြောက်လကျော်ကြသည့် တိုင်ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကိုလည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာဘဏ် စာရင်းတွင်ပြန်လည် ထည့်သွင်း ရန်ကုမ္ပဏီ၃၅ ခုကျန်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။